မန္တလေးပဲကပ်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
မန္တလေးပဲကပ်ကြော်ကို အိသက်အမေက မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်စားတတ်တယ်။
အိသက်ကတော့ ဒီတိုင်းလေးပဲ စားရတာကြိုက်ပါတယ်။
ချင်းနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းတဲ့ မန္တလေးပဲကပ်ကြော် ကြော်နည်းလေးပါနော်။
• ပဲကတ္တီပါ (Red Bean) - ဆန်ချိန်ခွက်၁ခွက်
(ပဲလွန်းရရင် ပဲလွန်းနဲ့လုပ်ပါ) or Red Kidney Bean Tin
• ကောက်ညင်းမှုန့် - ဆန်ခွက် တစ်ဝက်
• ဆန်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၂ မြွာ
• ဆား - အချိုဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သားမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပျဉ်းတော်သိမ် - အနည်းငယ် (ဓားနုတ်ပေါက်ပြီး)
• ချင်း - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ဆော်ဒါ - အချိုဇွန်းတစ်ဝက်
၁။ ပဲများကို နူးသွားအောင် ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။
ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပဲကို ခြေပါသည်။
၂။ ဘူးပဲကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ပြုတ်စရာမလိုဘဲ
၃။ ဆား၊ ဆော်ဒါ၊ ချင်း၊ ပျဉ်းတော်သိမ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ
ထောင်းထားတာများ ရောမွှေ ကာ အနေတော်အပြားလေးများပြားကာ
၄။ ကြော်နေရင်းနဲ့ကို ချင်းနံ့သင်းနေတဲ့ မန္တလေးပဲကြော်လေးရပါပြီ။
ဘိုကိတ်ပဲ...............၂ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ကောက်ညှင်းမှုန်. .....၃ ဇွန်း ( ထမင်းစား ဇွန်း)
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. .အနည်းငယ်စီ
ဘိုကိတ်ပဲကို အနည်းဆုံး(၃) နာရီခန်.ရေကြိုစိမ်ပြီးနှူးအောင်ပြုတ်ပါ။
( ရေခမ်းပါစေ...မအိပြဲသွားပါစေနှင့် )
ဇလုံတစ်ခုအတွင်းမှာ ထောင်းထားသောပဲ ၊ ချင်း+ကြက်သွန်ဖြူအရော၊ ကောက်ညှင်းမှုန်. ၊ အရသာထည့်ပြီး..ရေကိုလို
ဒိုးပြားဝိုင်းကြီးကြီးအရွယ်တွေဝိုင်းကာ ဆီပူပူမှာ ကြွပ်ကြွပ်လေးကြော်ပါ။